Musharax Aan lasaadaalineeyn oo ku Guuleystay Madaxweynaha 5ta sano Soo socota Ee Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Musharax Aan lasaadaalineeyn oo ku Guuleystay Madaxweynaha 5ta sano Soo socota Ee Puntland
Ahmed weheliye Gaashaan 8 January 2019 8 January 2019
Waxaa la soo gabagabeeyay tirinta cododka wareegii 3aad ee doorashada Madaxweynaha Puntland, waxaana ku guuleystay Saciid C/llaahi Deni oo helay 35 cod, halka Musharaxii la tartamayay Jen. Asad Cismaan uu helay 31 Cod.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Puntland ayaa ku dhawaaqay natiijada codka, iyadoo uu sheegay in Madaxweynaha Puntland ee 5-ta sano soo socota inuu yahay Saciid C/llaahi Deni.
Saciid C/llaahi Deni ayaa horay u soo noqday Wasiirkii Qorsheynta ee dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh.
Doorashada Madaxweynaha Puntland ayaa muujisay is bedelo aan la fileyn, iyadoo ay meesha ka baxeen Musharaxiin ay wadatay dowladda Federaalka oo qaarkood ku haray wareegga koowaad.